အမေဖြစ်သူထံ ကွယ်လွန်ပြီးခဲ့သူက ဝိညာည်ပူးကပ်ပြီး အကူအညီ တောင်းရာမှ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းလှသော အမှု – Myanmar Update News
news uptodate | January 7, 2021 | News | No Comments
ကွယ်လွန်ပြီးခဲ့သူကအမေဖြစ်သူထံ ဝိညာည်ပူးကပ်ပြီး အကူအညီ တောင်းရာမှ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းလှသော အမှု
ပရိသတ်ကြီးရေ အခုပြောပြပေးမှာ ကတော့ကွယ်လွန်ပြီးခဲ့သူက အမေဖြစ်သူထံ ဝိညာည်ပူးကပ်ပြီး အကူအညီ တောင်းရာမှ ဖော် ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်း လှသော အမှုဆိုတဲ့ အကြောင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြိတ်မြို့၊ ငွေပုလဲရပ် ၊ မွေးမြူရေး ဇုံတွင် လူ သတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်ထားသည်ကို အသတ် ခံရသူက အမေ ဖြစ်သူထံ ဝိဥာဉ်ပူးပြီး အကူ အညီ တောင်းရာ မှ အမှု အား ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင်ဖော် ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
မြိတ်မြို့၊ မြိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ငွေပုလဲရပ်၊မြို့ပတ်၂ လမ်း၊ မွေးမြူရေးဇုန်ရှိ ခြံ အမှတ် ၉တွင် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ် ကိုင်နေသည့် ဦးအောင်မိုးဆွေ ပျောက်ဆုံး နေသည်မှာ တစ်လခန့်ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အစ်ကို ဖြစ်သူက ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်မှ မြိတ်မြို့သို့လာရောက် ကာရဲစခန်းတွင်တိုင်ချက် ဖွင့်ပြီး တစ်ရက် အကြာတွင် ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ခြင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆီကို ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှာ လူပျောက်တိုင်ချက်လာဖွင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်၀န်းကျင်ကို သွားရောက်စုံစမ်းကြည့်တော့ ဘေးပတ်၀န်းကျင်က လူတွေ ကလည်း အဲဒီ ခြံထဲမှာတစ်ခုခု ဖြစ်နေကြောင်း မသင်္ကာဖြစ်နေတယ် လို့သိရတယ်။ ကျွန် တော်တို့ ခြံထဲ၀င် စစ်ဆေးကြည့်ပြီး အလောင်း မြှုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ မသင်္ကာ ဖြစ်တဲ့ နေရာကို သက်သေ တွေနှင့် တူးဖော် ရာကနေ အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
ဝိညာဉ်ပူးပြီး ဖော်ထုတ်တယ် ဆိုတာ ကတော့ ကာယကံရှင် တွေပဲ သိမှာပါ။ ကျွန်တော် တို့က ဥပဒေပိုင်းအရ ဆောင်ရွက် တာပါ လို့ မြိတ် မြို့မရဲစခန်းမှ တာ၀န်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့၀င် တစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်မိုးဆွေက အမေဖြစ်သူထံ ဝိညာဉ်ပူးပြီးအကူညီတောင်း ဆိုမှုကြောင့် အလောင်းကိုခြံထဲတွင် မြှုပ်နှံ ထားသည်ကို သိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အသတ်ခံရသည့်ဦးအောင်မိုးဆွေ၏အကိုဖြစ်သူဦးထင်အောင်စိုးကပြောကြားခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အမေကို ဝိညာဉ်၀င်ပူးပြီး ညီလေးက ပြောတာပါ။ ဇန်န ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့က ကျွန်တော်က မြိတ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ မှော်ဘီမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အမေကိုဝိဥာဉ်၀င်ပူးပြီး ညီလေးက အသတ် ခံရကြောင်း သူဘယ်မှ မသွားဘဲ ခြံထဲမှာ ရှိကြောင်း သူ့ကိုကူညီပေးပါလို့ပြောတယ်။ အိပ်မက်လည်းရပါတယ်။ အဲဒါကိုအမေက ကျွန်တော့်ဒေါ်လေးကို ပြောပြတာ ဒေါ်လေးကကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး အဲဒီအကြောင်းကို ပြောပြတာပါ။
ကျွန်တော် မြိတ်ရောက်တော့ ကျွန်တော့်ညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့ ခြံအလုပ်သမားတွေက ထား၀ယ်ဘက်သွားနေတယ်လို့ပြောတယ်။ ဖုန်းထဲမှာလည်း သူမသေခင်တုန်းက ခရီးထွက်စရာရှိကြောင်းတစ်လလောက် ကြာမယ်လို့လည်း message တွေ ပို့ခဲ့တယ်။ ကျွန် တော်က မသင်္ကာလို့ ရဲစခန်းမှာ လူပျောက် တိုင်ချက် ဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်ဟု အသတ်ခံရသူ၏ အစ်ကို ဖြစ်သူ ဦးထင်အောင်စိုးမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“အလောင်းမတွေ့ခင်မှာ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်း၀င် လာပါတယ်။ဦးထင်အောင်စိုးရဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာ ကတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အောင်မိုးဆွေ (အသတ်ခံရသူ)ရဲ့အသံ ဖြစ်နေတယ် ။ သူ့ရဲ့ ဖုန်းပြောတဲ့ ပုံစံ အတိုင်း ဟဲလို အောင် မိုးဆွေပါလို့ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ငါတော့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေပြီ။ ငါ့ကိုမင်းနဲ့ ဇော်ကိုဦး(နောက် သူငယ်ချင်း တစ်ဦး) ပဲ ကယ် လို့ရတော့မယ်။
ငါ့ကို ခြံထဲမှာ မြုပ်ထား ကြတယ်လို့ ငိုသံနှင့် ပြောပါတယ်။ ကျွန် တော်လည်း အရမ်း အံ့သြ သွားတယ်။ နောက်တော့ သူ့အစ်ကို ဦးထင်အောင်စိုး ကိုမေးကြည့်တော့ သူဖုန်းခေါ်တာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖုန်း၀င်တဲ့အသံပဲ ကြားနေရတယ်ဖုန်းတောင် မပြောရသေးဘူး လို့ပြောပါတယ်။ ဖုန်း၀င်တဲ့အသံကို တစ်ဖက်က ကြားနေရပေမယ့် ကျွန်တော့် ဆီမှာ ကတော့ အောင်မိုးဆွေ ရဲ့ အသံကို အတိုင်းသား ကြားနေရတာပါ။
ဒါ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ရတာပါလို့ ကိုအောင်မိုးဆွေ၏ သူ ငယ်ချင်းဖြစ်သူ ၀တုတ် (ခ) ကျော်၀င်းရှိန်မှ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ခြံထဲက လက်ရှိ အလုပ်သမားတွေကို ခေါ်ယူ စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ ပြစ် မှုကျူးလွန်တဲ့ ဇင်ကိုထိုက် (၁၇) နှစ်ကို ဖမ်းမိ ထား ပြီးပါပြီ။ အဓိ က တရားခံလို့ ယူဆရတဲ့ ရဲမင်းဆွေဆိုသူကို အခု လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ အလုပ်ထဲကထုတ်ခံထားရတာကို အကြောင်းပြပြီးဖြစ် တာလို့ ပြောတယ်။ မိထားတဲ့ သူကတော့ ၀န်ခံထားပြီး ပါပြီ။ ဗိုက်ကို ဓားနှင့် ထိုးတယ်။
ပြီးတော့ လည်ပင်းကိုလည်း ဓားနဲ့ထိုးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန် မာ ဘီယာ ကြော်ငြာဗီနိုင်းစ နဲ့ပတ်ပြီး ခြံထဲမှာ မြှုပ်ထား ခဲ့တယ်။ ပတ်၀န်းကျင် ကိုလည်း အလုပ်ရှင် ခရီးထွက် နေတယ်လို့ ပြောပြီးသူတို့ကဟန်မပျက်ပုံမှန်လုပ်ငန်းလုပ်နေကြတယ်။အခုတစ်ယောက် ထွက်ပြေးနေလို့ ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့၀င် တွေ လိုက်ဖမ်း နေပါတယ် ဟု မြို့မ ရဲစခန်း မှ တာ၀န် ရှိသူ တစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြိတ်မြို့မရဲစခန်းမှ(ပ )၁၂ /၂၀၁၆၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂၊၂၀၂၊၁၁၄ တို့ဖြင့်အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ဤ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ် အပျက်ကို ပရိသတ်ကြီး အ တွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံး လည်း သာယာ သော နေ့လေးဖြစ်ပါစေ ။ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
source : Daily Myanmar News
ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ အောင်လအန်ဆန်း နဲ့ ဘစ်ဒက် ကစားမယ်ဆိုတာဆိုတဲ့ ပွဲက သတင်း အမှားလား ….? အမှန်လား…?
ဟန္ျငိမ္းဦး ခ်ျပလာတဲ႔ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ၾကည့္ရမယ့္ အလွမယ္သင္းသင္းနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းတို့ ေဖာက္ျပန္ထားတဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္အေၾကာင္း